Ihe omimi na-enye SEO Atụmatụ Na Otu esi eme ka ọrụ mmemme mgbasa ozi na-emewanyewanye
SEO na mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze bụ ihe abụọ na - enweghị ike ịgụta ọnụ mgbe ọ bịaraịntanetị. Ma Social Media Marketing na SEO ọrụ bụ organic, inbound azum. Ha niile na-elekwasị anya na-ewu ihena-achọ ihe oyiyi akara nke na-adọtakarị mma okporo ụzọ - coil tfv12. Usoro mgbasa ozi na-eji ọdịnaya dị elu nke kachasị anya nke ndị mmadụonye na-agụ ya. N'ihi ya, Social media na-enye a anụ n'elu ikpo okwu maka na-egosi ika ọnụ yana boosting gị SEO usoroetinye aka na ndị na-ege ntị ziri ezi.
Maka ihe ntanetị ọ bụla, ọ doro anya na mgbasa ozi ọha na eze nwere ike imeziwanyenchịkọta ụlọ ọrụ ọchụchọ nke weebụ. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọkachamara na SEO na ndị na-ahụ maka mgbasa ozi enweghị ike ịkọwa otú mgbasa ozi mgbasa ozi na-emetụta SEO arụmọrụ.Max Bell, Njikwa Ihe Nlekọta Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-akọwa ihe SEO na-enweta mgbasa ozi ọha na eze na-enye ndị nwe saịtị.
Na-eto Eto nke Ndị Na-eso Ụzọ Gị
Mgbasa ozi mgbasa ozi na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eso ụzọ dị mmaebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ karịa ndị na-eso ụzọ ole na ole. Dị ka ọmụmaatụ, ndị mmadụ nwere ike iji ọdịnaya gị na-emekọrịta ihe mgbe ị na -na ịpị njikọ, ịchọtagharị ma ọ bụ ọbụna ịtụle nyocha na Google. Ụlọ ọrụ nke nwere 100 ndị na-eso ụzọ agaghị enweta ọkwa yiri nke ahụego dịka ụlọ ọrụ nke nwere nde mmadụ abụọ n'otu amaokwu ndị ahụ. Ịba ụba nke ndị na-eso ụzọ gị nwere ike ịbụ ihe dị oké mkpa iji rụọ dị okedị ka ọkwa dị iche iche. Otú ọ dị, o nwere njedebe. Dị ka ọmụmaatụ, Google agaghị enye proxy ego nke na peeji nke na 1000 proxy ụmụazụ.N'ihi ya, ọ dị mkpa ichere maka ezigbo ndị òtù, bụ ndị na-emekọrịta ma na-agba ndị mmadụ ume ịbanye n'òtù gị maọbụpịa njikọ.
Iji nyocha dị oke achọ na ebe nrụọrụ weebụ gị
Dịka na weebụsaịtị, isiokwu dị iche iche na-arụ ọrụ yiri nke ahụ na mgbasa ozi.Maka nsonaazụ ntanetị nke mmadụ na-ebuli elu, ọtụtụ nkwụnye na mbadamba kwesịrị ịnwe dịka ederede na-eji mkpaederede. Ihe ọ bụla dịka Facebook ga-eso ụfọdụ usoro siri ike nke na-enyere gị aka iduzi ndị na-ege gị ntị na saịtị gị. Socialntanetị mgbasa ozi bụ njikọ njikọ. Njikọ ndị a na-enyere aka ịchọta ọchụchọ nyochaa weebụsaịtị yana ọtụtụ ndị ọbịa sitere na mgbasa ozi mgbasa ozindị nwere ole na ole.
Igosipụta ozi gị maka nyocha
Ọ dị mkpa ka ị nweta ihe ntanetị nwere ike ịnweta na ebe nrụọrụ weebụ. Makadịka, saịtị ndị dịka Pinterest na-eme ka ibe weebụ dị na nke ndị ọzọ dị mma n'ihi ụlọ ọrụ mgbasaozi dị mma. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ọtụtụebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ nwere usoro iwu nzuzo nke nwere ike ime ka ụfọdụ ndị a họọrọ dịka ndị na-eso ụzọ gosipụta ya. Dịka ọmụmaatụ, a YouTubevideo nwere ike depụtara naanị maka ndị mmadụ na njikọ ya. Na ntọala Facebook, enwere ike igosi njikọ naanị maka ndị ahụ, na-ekwe ka nleleusoro iheomume. Site na nke a, ọ bụrụ na ị na - ebuli ọchụchọ gị na mgbasa ozi mmadụ, ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịkwado elu.
Mkpokọta mgbasa ozi ọha na eze nwere mmetụta dị ịrịba ama na nyocha ọchụchọogo nke ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. Ọtụtụ usoro mgbasa ozi viral chọrọ ka iji usoro mgbasa ozi mgbasa ozi dị irè iji meenweta ihe ịga nke ọma. Nnọkọ mgbasa ozi na-arụsi ọrụ ike bụ ihe na-egosi isi nke ndị na-agụ akwụkwọ na niche gị nke nwere ike ịghọ ndị ọbịa ngwa ngwasite na itinye njikọ na ndekọ dị iche iche na akwụkwọ fanyere. N'ihi ya, azụmahịa ọ bụla na-eji ịntanetị nwere ike irite uru site na backlinks àgwàna okporo ụzọ nke si na ntanetị mgbasa ozi na-erite uru site na mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi.